Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) - Hello Sayarwon
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား )
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
လူကီးမီးယားဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ သွေးဖြစ်မည့် ပစ္စည်းများ – ရိုးတွင်းချဉ်ဆီနှင့် ပြန်ရည်ကြောစနစ်များ တွင်ဖြစ်သော ကင်ဆာရောဂါဖြစ်သည်။ သင့်၌ လူကီးမီးယားရှိသည့်အါ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီသည် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် သွေးဖြူဥများကို ထုတ်၏။ ထိုသွေးဖြူဥများကို လူကီးမီးယားဆဲလ်များဟု ခေါ်သည်။
သူတို့သည် ပုံမှန်သွေးဖြူဥများကဲ့သို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ပုံမှန်ဆဲလ်များထက် အပွားပြန်ပြီး ရပ်သင့်သည့်အချိန်တွင်လည်း ဆက်ပွား၏။
လူကီးမီးယားအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လူကီးမီးယားအား အခြေအနေမြန်မြန်ဆိုးပုံ၊ ထိခိုက်နေသော သွေးဖြူဥဆဲလ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး အုပ်စုခွဲ၏။
ရုတ်တရတ်ပြင်းထန်နိုင်သလို နာတာရှည်ရောဂါလဲဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်လူကီးမီးယားသည် လျင်လျင်မြန်မြန်ဆိုးဝါးပြီး သင့်အားချက်ချင်း နေမကောင်းစေနိုင်၏။ နာတာရှည်လူကီးမီးယားတွင်တော့ ဆိုးဝါးမှုသည် ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာပြီး နှစ်များစွာကြာအောင် လက္ခဏာမပြတတ်ပါ။
၎င်းသည် လင်ဖက်တစ် သို့ မိုင်လိုဂျီးနပ်ဆိုပြီး ဖြစ်နိုင်၏။ လင်ဖက်တစ် (သို့ ပြန်ရည်ဆဲလ်ဆိုင်ရာ) လူကီးမီးယားသည် ပြန်ရည်ဆဲလ် – လင်ဖိုဆိုက် သွေးဖြူဥအမျိုးအစားကို ထိခိုက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ မိုင်လိုဂျီးနပ် လူကီးယားမီးတွင်တော့ တခြားဆဲလ်အမျိုးအစားဖြစ်သည့် ဂရန်နျူလိုဆိုက်မျာဒ၊ သွေးနီဥများ နှင့် သွေးမွှားဥများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမည့် ဆဲလ်အမျိုးအစားကို ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်ပြန်ရည်ဆဲလ်ဆိုင်ရာလူကီးမီးယား (ALL)။ ပြင်းထန်ပြန်ရည်ဆဲလ်ဆိုင်ရာလူကီးမီးယားသည် ကလေးများတွင် အဖြစ်များ၏။
ပြင်ထန်းမိုင်လိုဂျီးနပ်လူကီးမီးယား (AML) ။ တွေ့ရအများဆုံး လူကီးမီးယားဖြစ်သည်။
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ပင်းထန်မိုင်လိုဂျီးနပ်လူကီးမီးယား (AML) သည် ကလေးနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အမျိုးသားကင်ဆာတက္ကသိုလ် (NCI) အရ အမေရိကန်၌ နှစ်စဉ် AML 21,000 ခန့် အသစ်တွေ့ရှိရသည်ဟုဆိုသည်။
ပြင်းထန်ပြန်ရည်ဆဲလ်လူကီးမီးယား 6,000 ခန့်ကို နှစ်စဉ် အသစ်တွေ့ရှိနေရပါသည်။
သို့သော် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ချွေးအလွန်ထွက်ခြင်း အထူးသဖြင့် ညများတွင် (“ညချွေးပြန်ခြင်း”ဟုခေါ်သည်။)
မောပန်းလွယ်ခြင်းနှင့် ခွန်အားနည်းခြင်းတို့သည် နားနေလျှင်တောင် ပျောက်မသွားခြင်း
မနာကျင်ပဲ ပြန်ရည်ကျိတ်များဖောင်းလာခြင်း (အထူးသဖြင့် လည်ပင်းနှင့် ချိုင်းကြားတွင်)
အရေပြားတွင် Petechiae ဟုခေါ်သော အနီအပြောက်များ ပေါ်လာခြင်း
အလွယ်တကူ သွေးထွက်လွယ် သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း
ချမ်းတုန်ခြင်း သို့ ဖျားခြင်း
လူကီးမီးယားသည် ကင်ဆာဆဲလ်များ သက်ရောက်နေသည့်ကိုယ်အင်္ဂါ လက္ခဏာများကိုလဲ ပြတတ်ပါသည်။ ဥပမာ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သို့ ကင်ဆာဆဲလ်များ ပျံ့သွားလျှင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ခြင်းနှင့် တက်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ပင်းထန်လူကီးမီးယားလက္ခဏာများသည် သိပ်မသဲမကွဲနှင့် တိတိကျကျမရှိတတ်ပါ။ လူကီးမီးယား၏ အစောပိုင်းလက္ခဏာများသည် တုပ်ကွေးနှင့်တခြားသော ဖြစ်နေကျရောဂါများနှင့် တူနေတတ်သောကြောင့် ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေမိနိုင်သည်။
သင့်ဆီတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပင်းထန်လူကီးမီးယားကို ဘာကဖြစ်စေကြောင်း ကျွမ်းကျင်းသူများ မသိရသေးပါ။ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြင်းထန်လူကီးမီးယားသည် တစ်ချို့သွေးဆဲလ်များ ၎င်းတို့၏ ဒီအန်အေ၌ ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းများကြောင့်ဟု ထင်ရသည်။
ဒီအန်အေကို ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင်ပါသော ဆဲလ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်မျိုးဟု ခေါ်နိုင်သည်။ ဆဲလ်များအတွင်း တခြားပြောင်းလဲမှုများ (၎င်းတို့ကို သေချာနားမလည်နိုင်သေးပါ)ကြောင့်လည်း လူကီးမီးယားဖြစ်ရပါသည်။
တစ်ချို့သော မူမမှန်မှုများသည် ဆဲလ်များကို ကွဲပွားကြီးထွားစေပြီး ပုံမှန်ဆဲလ်သေရမည့်အချိန်တွင်လည်း ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့် ထိုမူမမှန်သည့်ဆဲလ်များ များလာပြီး ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ၌ ကျန်းများသည့်သွေးဆဲလ်များကို တွန်းဖယ်ပစ်သည်။
ထိုအခါ ကျန်းမားသောသွေးဖြူဥများ သွေးနီဥများနှင့် သွေးမွှားဥများ နည်းလာကာ လူကီးမီးယား၏ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ပင်းထန်လူကီးမီးယား ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ –
ယခင်ဖြစ်နေသည့် ကင်ဆားအား ဆေးသွင်းခြင်း သို့ ဓာတ်ကင်ခြင်းမှ ဖြစ်လာခြင်း
မွေးရာပါဒေါင်းရောဂါကဲ့သို့ ခရိုမိုဇုမ်းများ မူမမှန်ရာမှဖြစ်ခြင်း
မိသားစုမျိုးရိုးရှိခြင်း။ တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် CLL သည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်၏။
သက်လတ်ပိုင်း သက်ကြီးပိုင်း အမျိုးသား လူဖြူ ဖြစ်နေခြင်း
ဖီလဲဒီးဖီးယားခရိုမိုဇုမ်းဟုခေါ်သော ဗီဇပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နေခြင်း
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အောက်ပါ ရောဂါအမည်တပ်နိုင်မည့်စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ရနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်သည် လူကီးမီးယား၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများဖြစ်သော သွေးအားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြူဖျော့သောအသားအရေ၊ ပြန်ရည်ကျိတ်များနှင့် အသည်း သို့ ဘေလုံးကြီးခြင်းတို့ကို ရှာပါလိမ့်မည်။
သွေးနမူနာကိုယူကာ သင့်၌ သွေးဖြူဥ သို့ သွေးမွှားဥများ ပုံမှန်လယ်ဗယ်ရှိမရှိကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုမှ လူကီးမီးယားရှိမရှိ စဉ်းစားနိုင်သည်။
သင်၏တင်ပဆုံရိုးမှ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီယူရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအား လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ ချဉ်ဆီအား ပိန်သွယ်ရှည်လျားသည့်အပ်ကိုသုံးကာ စုပ်ယူပါမည်။ နမူနာအား ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ကာ လူကီးမီးယားဆဲလ်များ ရှိမရှိ ရှာနိုင်ပါသည်။
လူကီးမီးယားဆဲလ်များအတွက် အထူးပြုစစ်ဆေးချက်များတွင် ကုထုံးရွေးချယ်မှုအား ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် တစ်ချို့သော ၀ိသေသများကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။
ရောဂါအားအတည်ပြုရန်၊ လူကီးမီးယားအမျိုးအစားအား ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပျံ့နေသောပမာဏကိုသိနိုင်ရန် ထပ်ဆောင်စစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ရပါမည်။ တစ်ချို့သော လူကီးမီးယားအမျိုးအစားများတွင် အဆင့်ခွဲပြီး ရောဂါပြင်းထန်နှုန်းကို ပြရကြပါသည်။ သင့်လူကီးမီးယားအဆင့်သည် ဆရာဝန်အား ကုထုံးဆုံးဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။
Acute Leukemia ( ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လူကီးမီးယားကို တိုက်ရာတွင်အသုံးများသော ကုထုံးများ –
ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းသည် လူကီးမီးယားကုသခြင်း၏ အဓိကပုံစံဖြစ်သည်။ ဒီဆေးကုထုံးသည် ဓာတုပစ္စည်းများကိုသုံးပြီး လူကီးမီးယားဆဲလ်များကို သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇီဝဗေဒကုထုံးသည် သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်အား လူကီးမီးယားဆဲလ်များကို သတိထားမိစေပြီး တိုက်ခိုက်စေရန် ပြုလုပ်နည်းများကို သုံးသောကုထုံးဖြစ်သည်။
တားဂတ်ထားကုထုံးသည် ကင်ဆာဆဲလ်များမှ အားနည်းသည့်အပိုင်းများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်သည့် ဆေးများကိုသုံး၏။
ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွင် အိတ်ရေးရောင်ခြည် သို့ တခြားသောစွမ်းအင်ပြင်းရောင်ခြည်းများကိုသုံးကာ လူကီးမီးယားဆဲလ်များကိုသတ်ခြင်း ကြီးထွားမှုရပ်တန့်စေခြင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသရာတွင် သင်သည် စက်ကြီးများ ပတ်ပတ်လည်၌ရွေ့လျားနိုင်သည့် စားပွဲတွင်လှဲနေရမည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ရောင်ခြည်ပြချင်သောနေရာများကို တိတိကျကျချိန်နိုင်ပါသည်။ လူကီးမီးယားဆဲလ်များ စုပုံနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်နေရာသို့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ပြရသည်။ သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်လုံးကို ပြရသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသည် ပင်မဆဲလ်အစားထိုးကုသမှုမတိုင်ခင် ပြုလုပ်ထားရသည်မျိုးလဲရှိ၏။
ပင်မဆဲလ်အစားထိုးခြင်းဆိုသည်မှာ ရောဂါဖြစ်နေသော သင့်ချဉ်ဆီများအား ကျန်းမာသော ရိုးတွင်ချဉ်ဆီများနှင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ပြင်းထန်လူကီးမီးယား ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သော လူနေမှုပုံစံ အထူးသဖြင့် သင့်နိုင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိနေလျှင် အရေးကြီး၏။ ထိုသိုနေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ –
ဓာတ်ရောင်ခြည်အများအပြားထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ပါ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်ကို လျော့ချနိုင်ရန် အကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အလုပ်အင်္ကျီကိုဝတ်ပါ။
ဓာတုဘန်ဇင်းများနှင့် ထိတွေ့ရခြင်းကို ရှောင်ပါ
အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုလျှင် သင့်အတွက်သင့်တော်သော အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Acute leukemia. http://www.healthline.com/health/leukemia#Overview1. Accessed November 12, 2016.
Acute leukemia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/leukemia/basics/treatment/con-20024914. Accessed November 12, 2016.
Acute leukemia. http://www.webmd.com/cancer/tc/leukemia-topic-overview#1. Accessed November 12, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စကျတငျဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စကျတငျဘာ 13, 2019
ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဖောက်ထုတ်စစ်ဆေးခြင်း ( Bone marrow aspiration)
ဈေးသွားတဲ့အိမ်ရှင်မတိုင်း သိထားသင့် ဖော်မလင်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေရဲ့ အန္တရာယ်။ ။